पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ पौष २० गते (सन् २०२१ जनवरी ४ तारिख) सोमबार : ॐ शिव शंकर भोले बाबा । - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ पौष २० गते (सन् २०२१ जनवरी ४...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ पौष २० गते (सन् २०२१ जनवरी ४ तारिख) सोमबार : ॐ शिव शंकर भोले बाबा ।
२० पुष २०७७, सोमबार ११:००
बृष – शुभ काममा सफलता प्राप्त होला । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्लान् । आयस्रोत बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला । दूरदेशबाट शुभ समाचार प्राप्त होला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । मान–सम्मान बढ्ला । विजय मिल्नेछ । सौर्य बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्ला । धर्मकर्ममा रुचि बढ्ला ।
मिथुन – नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नुपर्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्ला । हांसविलासमा मन लाग्ला । जोखिममा नपर्नु हितकर हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नुहोला ।
कर्कट – सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । अरुको भरमा नबसी आफ्नै बल र विवेकले काम गर्नहोला । आयस्रोत बढ्नेछ । रोकिएको धन उठ्नेछ । सुख शान्ति बढ्नेछ । पारिवारिक स्थिति पनि अनुकूल रहनेछ । यात्रा होला । धनसम्पति बढ्ला ।
तुला – भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । भागदौड लागिरहला । शारीरिक र आर्थिक काममा प्रगति होला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । इष्टमित्र सुख सन्तति बढ्नेछन् । शैक्षिक, बौद्धिक, कलात्मक, गीत–संगीत आदि कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ ।
वृश्चिक – विवादप्रति सचेत रहँदै अरुको भरमा नपरी काम गर्नु हितकर रहला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । गीत–संगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रापरक काम बन्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । दूरदेशबाट शुभ समाचार सुन्नु हुनेछ । इष्टमित्र सन्तान सुख बढ्ला ।
अघिको समचार पूर्वाञ्चलमा देशभक्तहरुको पूर्वाञ्चलस्तरीय ¥याली बुधबार गर्ने
अर्को समचार मोसु नेपालको नवौं वार्षिक साधारणसभा तथा बनभोज व्यववसायिक कृषि फर्ममा सम्पन्न